SMS FAMPAHAFANTARANA NY MAIL.RU VAOVAO MAIL.RU - MAIL.RU MAIL - 2019
Tena Mail.ru Mail
Mametraka SMS-fampandrenesana ao amin'ny Mail.ru
SMS fampandrenesana dia toetra tsara iray izay manome antsika ny Mail.ru. Azonao ampiasaina izany mba hahafantaranao foana raha hahazo hafatra amin'ny mailaka ianao. Ity SMS ity dia misy angona momba ny taratasy: avy aiza izy io ary amin'ny lohahevitra, ary koa ny rohy ahafahanao mamaky azy tanteraka. Saingy, indrisy, tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba hampifandimbiasana sy hampiasana io asa io. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba hametrahana SMS ho an'ny Mail.ru.
Ahoana ny fampifandraisana ireo hafatra SMS amin'ny Mail.ru
Mampalahelo fa tsy ny mpandraharaha rehetra no manohana ity endri-javatra ity.
Hanombohana, midira amin'ny kaontinao Mail.ru ary mandehana "Settings" amin'ny fampiasana ny menus pop-up ao ambony ankavanana.
Zarao amin'ny fizarana izao "Notifications".
Ankehitriny dia mitohy ny fampandrenesana ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny solo-kevitra mifanaraka amin'izany ary mametraka SMS araka izay ilainao.
Ankehitriny dia hahazo SMS ianao isaky ny nahazoanao imailaka mailaka. Azonao atao koa ny mampifanaraka filtre fanampiny mba hampahafantarina anao raha toa ka misy zavatra manan-danja na mahaliana tonga ao anaty mailakao. Tsara vintana!
https://termotools.com mg.termotools.com © Mail.ru Mail 2019